ANDROVA MAHAJANGA : NIVEZIVEZY NANDRITRA NY ADINY FOLO TAO AMIN’NY HOPITALY ILAY MPANGALA-JAZALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYANDROVA MAHAJANGA : NIVEZIVEZY NANDRITRA NY ADINY FOLO TAO AMIN’NY HOPITALY ILAY MPANGALA-JAZA
ANDROVA MAHAJANGA : NIVEZIVEZY NANDRITRA NY ADINY FOLO TAO AMIN’NY HOPITALY ILAY MPANGALA-JAZA
Hateloana anio no tsy nahitàna popoka ilay zaza menavava nisy nangalatra tao amin’ny sampam-piterahana ao amin’ny hopitalim-panjakana Androva, Mahajanga. Vehivavy lehibe nisandoka ho mpitsabo mpanampy no fantatra fa efa nihaodihaody tao amin’io hopitaly io nanomboka tamin’ny 7 ora hariva ka hatramin’ny tamin’ny 5 ora maraina.
«Ny hariva tamin’ny 7ora no efa hitanay nivezivezy tato amin’ny hopitaly ilay ramatoa, saingy nanao aron’ankanjo fotsy sy naka tahaka ny fanaon’ireo mpitsabo mpanampy rehetra. Maro ihany koa ireo mpiasan’ny hopitaly mitsapa sy mijery ny toe-pahasalaman’ireo zaza ka tsy hainay intsony ny nanavaka azy», araka ny fijoroana vavolombelona nataona raim-pianakaviana iray efitrano tamin’ilay zaza very.
Nanodidina ny tamin’ny 5 ora maraina anefa dia fantatra fa nalainy teny an-tratran-dreniny ilay zaza menavava, ary nolazainy fa ho entina hampandroana. Fantatra mihitsy aza fa nahita maso izany avokoa ireo tera-bao niray efitrano, ary torak’izany ihany koa ireo mpanaraka.
Nandeha anefa ny fotoana, ora iray mahery taty aorian’ny nakan’ilay ramatoa azy, tsy mbola hita izay nalehan’ilay zaza tsy manan-tsiny. Mahina ny renibeny ka nikoropaka nanontany tany amin’ny trano fandroana, saingy nandà ny nisian’ny fakàna io zaza io ireo tomponandraikitra. Teo vao tankina ny reniben’ilay zazakely ary nikoropaka nampandre ireo lehibe kosa ny mpiasan’ny hopitaly.
“Raha ny tokony ho izy mantsy dia tsy manana fahafahana haka ny zaza eny amin’ny ray aman-dreniny ny mpiasan’ny hopitaly. Ireo tompon’ny zaza irery ihany no mitondra azy any amin’ny trano fampandroana”, raha ny fanazavan’ny tomponandraikitra eo anivon’ny hopitaly.
Na izany aza dia maro ireo nametra-panontaniana noho ity tranga ity ny amin’ny fahalalahan’ireo olon-dratsy miditra sy mivoaka ny hopitaly. Porofon’izany ny nananan’ilay mpangala-jaza am-polony ora nivezivezena tao nanerena ireo efitrano.
Partager la publication "ANDROVA MAHAJANGA : NIVEZIVEZY NANDRITRA NY ADINY FOLO TAO AMIN’NY HOPITALY ILAY MPANGALA-JAZA"
スーパーコピールイヴィトン 26/09/2018 at 05:21 Repondre
Carmine 14/01/2019 at 18:54 Repondre
Lever du soleil : 05:25